Download fileflyer | Download rapidshare
မေးးwonna1972@gmail.comးDear Brother, Can I get the software CCPROXY? If you have time please find and sent me link. I wantakengen also. ကိုဖိုးလပြည့် ရေးပေးထားတဲ့ ccproxy အသုံးပြုနည်း စာအုပ်ကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . စာအုပ်ထဲမှာ ccproxy software ကိုပါ ထည့်ပေးထားပါတယ် . စာအုပ်ကို download လုပ် ဖတ်ပြီး သုံးကြည့်လိုက်ပါ . မိမိတို့အိမ်မှာ အင်တာနက်တပ်ဆင်ရင် သားသမီးတွေအတွက် မကြည့်သင့်တဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်တွေကို ပိတ်ပင်ချင်သလား ?
မြန်နှုန်းမြှင့် speed gear
မေးးsawtheodore@gmail.comးအစ်ကိုရေ ကျွန်တော်အစ်ကို့ဆီကဆော့ဝဲလ်တစ်ခုတောင်းချင်လို့ပါ။ speed gear ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ CNet ကနေဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးသုံးတာ တစ်ပတ်ပဲသုံးလို့ရတယ် Register code တောင်းလို့။ အစ်ကိုကျွန်တော့်ကို အဲ့ဒီဆော့ဝဲလ်ပေးပါလား
ဖြေးကဲ အစ်ကိုရေ အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဆင်ပြေတဲ့ Link ကနေသာ download လုပ်လိုက်ပါ . ဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးတာလဲဆိုတော့ အင်တာနက် မြန်ဆန်အောင် ကူညီပေးတဲ့ နေရာတွေမှာ သုံးတာပါ . အင်တာနက် အနည်းငယ်ပို မြန်လာအောင်လို့ သုံးတာပါ . သုံးကြည့်လိုက်ပါ . အထဲမှာ ကီးဖိုင်ပါ ပါပါတယ် .
တောင်းထားတဲ့သူရှိလို့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ . အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ . အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ . တစ်ခြားလိုချင်တဲ့သူများလဲ မေးလ်ပို့ပြီး တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ် . အဆင်ပြေအောင်တော့ အကောင်းဆုံး hosting ဆိုက်တွေကပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . Download ifile.it | Downlad mediafire | Download zshare | Download ziddu
TuneUp Utilities 2011 Build 10.0.300
Regular maintenance increases the stability of your PC , but is complicated and takesalot of time when doing it manually. Spare yourself the stress! With TuneUp Utilities , you can clean up your computer and delete unnecessary files with only one click. Neat!1-Click Maintenance and Automatic Maintenance
office password recovery 6.1.1
တောင်းထားလို့ ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ အထဲမှာ Key ပါပြီးသားပါ . Download ifile.it | Download mediafire | Download ziddu | Download zshare
မေးးဦးအဂ္ဂ၀ံသးဒကာကြီး ညီနေမင်း ဦးဇင်း သုံးနေတဲ့ Acer, inc Aspire 3680 အတွက် softwear တွေ လိုအပ်နေလို့ပါ .. ကူညီပေးပါဦးလို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ် ..Chipset :Intel ChipsetOperating system : Windows XPCompatibility : Acer Aspire 3680 LAN :Realtek LANMarvell LANOperating system : Windows XPCompatibility : Acer Aspire 3680 WLAN :Atheros WLANAtheros 802abgBroadcom WLANIntel WLANOperating system : Windows XPCompatibility : Acer Aspire 3680 Graphic :Intel VGA | Graphic CardnVidia VGA | Graphic CardOperating system : Windows XPCompatibility : Acer Aspire 3680 Web Cam :Bison CameraSuyin cameraLogitech OrbicamOrbicam CameraOperating system : Windows XPCompatibility : Acer Aspire 3680 TouchPad :TouchpadOperating system : Windows XPCompatibility : Acer Aspire 3680 Audio :Audio DriverOperating system : Windows XPCompatibility : Acer Aspire 3680 Card Reader :Card ReaderOperating system : Windows XPCompatibility : Acer Aspire 3680 Modem :ModemAgere Modem New ModelOperating system : Windows XPCompatibility : Acer Aspire 3680 Bluetooth :BluetoothOperating system : Windows XPCompatibility : Acer Aspire 3680 Application :EzDock ModemLaunch Manager
Acer Aspire 3620 Drivers for Windows Vista
Acer Aspire 3620 Vista Drivers DownloadAgere Azalia Modem DriverAgere System A97 Modem DriverAcer Aspire 3620 Bluetooth DriverAcer Aspire 3620 Infrared Supplement ToolIntel VGA Graphics Video DriverAcer Aspire 3620 Launch ManagerRealtek AC97 Sound Audio Driver Read More
မေး alinyaung553@gmail.comးအစ်ကို......ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့စက်က......Acer Aspire 3620 ပါ။အဲအတွက် Window XP Driver လေးလိုချင်လို့ပါ။ အစ်ကို.. အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်.. .ရှာပေးပါအုံးနော်...Broadcom Wireless WLAN DriverFoxconn Wireless WLAN DriverAcer Aspire 3620 AcerGrid for Windows XPAcer Aspire 3620 Sound Audio DriverAcer Aspire 3620 Chipset XP DriverAcer Aspire 3620 LAN Ethernet DriverAcer Aspire 3620 Launch ManagerAcer Aspire 3620 Modem DriverAcer Aspire 3620 Touchpad DriverAcer Aspire 3620 VGA Graphics Video Driver
ညီနေမင်းLaptop Driver များ, Samsung Drivers
Samsung R423 Driver For XP
ကိုညီရေ ဥဇင်းမေးတာတွေကို ဖြေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ အခု နောက်တစ်ခု ထပ်ပြီး မေးချင်လို့ပါ။ ဥဇင်းစက်က အစတုန်းကတော့ ၀င်းဒိုး xp သုံးပါတယ်။ အခု ၀င်းဒိုး7 တင်လိုက်တော့ driver လိုနေလို့ အဆင်ပြေရင် ရှာပေးစေချင်ပါတယ်။ ဥဇင်းသုံးတဲ့စက်က samsung np-R423 ပါ ။ ကျေးဇူး ပါပဲနော်။ ပထမသုံးတဲ့ driver က သုံးလို့ရတာရှိသလို သုံးလို့မရတာတွေလဲရှိနေလို့ပါ။တပည့်တော် xp အတွက်တော့ ရှာပေးလိုက်ပါပြီ . window7အတွက် ထပ်ရှာကြည့်ပါဦးမယ် . HDMIDownloadSound(Audio) DriverDownloadGraphicsVGA(Graphics),AMDDownloadKeyboard, Mouse and Input DevicesTouchpad DriverDownloadCameraCamera DriverDownloadNetworkBroadcom Bluetooth DriverDownloadWireless LAN ATHEROS DriverDownloadLan DriverDownloadSoftwareEasy Display ManagerDownloadMagic KeyboardDownloadSAMSUNG Battery ManagerDownload
ညီနေမင်းHP Drivers, Laptop Driver များ
HP Pavilion dv6000 for Windows7Driver
CHIPSET:Nvidia Nforce chipset drivers:DownloadGRAPHIC:Nvidia Graphic:DownloadAUDIOConexant High-Definition SmartAudio 221 DriverDownloadLightscribe System SoftwareDownloadWIRELESS:==================If you have Intel Wireless:Intel Wireless LAN Driver for Microsoft Windows 7DownloadIf you have Broadcom Wireless:Broadcom Wireless LAN Driver for Microsoft Windows 7DownloadIf you have Atheros WirelessAtheros Wireless LAN Driver for Microsoft Windows 7Download==================Software Support for HP Integrated Module with Bluetooth Wireless TechnologyDownloadHP Wireless AssistantDownload Ricoh 5-in-1 Card Reader DriverDownload
hp pavilion dv6000 driver for window xp
မေး amc.pegu@gmail.com ; ကျွန်တော့် computer hp pavilion dv6000 drivers download မရလို့ ကျေးဇူးပြုပြီးတင်ပေးပါလားကဲကိုအောင်မျိုးချမ်းရေ တင်ပေးလိုက်ပါပြီနော် . အောက်မှာ Direct link ကနေသာ Download ချလိုက်ပါ .AUDIOFirst install UAAMicrosoft Universal Audio Architecture (UAA) Bus Driver for High Definition Audio (sp33867)Audio DriverConexant High Definition Audio DriverHigh Definition Audio DriverCHIPSETNVIDIA nForce Chipset Driver and Network ControllerGraphic driverGRAPHICSNVIDIA GeForce Series Video DriverGraphic DriverDriver - Keyboard, Mouse and Input DevicesHP Quick Launch ButtonsSynaptics TouchpadHP 1.3 MegaPixel (MP) Webcam Software DriversHP Pavilion Webcam DriverMODEMHDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCPModem DriverNETWORKBroadcom Wireless LAN DriverLAN DriverHP Wireless AssistantWireless DriverRicoh 5-in-1 Card Reader DriverCard Reader Drive
password မေ့တတ်သူများအတွက် window ရဲ့ admin password ကိုဘယ်လို ပြန်ဖျက်မလဲ
မေးထားတဲ့သူတွေလဲ အများကြီးပါပဲ . အခုဟာလေးက အတော်လေး အဆင်ပြေတာကြောင့် တင်ပေးလိုက်တာပါ. တွေ့တာတော့ ၄ - ၅ မျိုးလောက်ရှိပါတယ် . တစ်ခြားဟာတွေက သိပ်အဆင်မပြေ တာကြောင့် မပြောပြတော့ပါဘူး. သူများရေးပြီးသားလဲ မရေးချင်တာကြောင့် လိုက်ရှာရင်းနဲ့ ဒီကောင်လေးကို တွေ့သွားတာပါ . တစ်ချို့က safe mode ကနေ ၀င်ပြီးတော့ admin password ကို ဖျက်ကြပါတယ် . တစ်ခါတစ်လေမှာ safe mode ကတောင် ၀င်လို့မရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် ဒီကောင်လေးကို သုံးကြည့်စေချင်ပါတယ် . အဆင့်ကလဲ လုပ်ရမှာ သိပ်မများပါဘူး. နည်းနည်းလေးပါ . အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .http://trinityhome.org ဆိုက်ကနေ Trinity Rescue Kit ကို Download လုပ်ယူလိုက်ပါ . ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိသူများအတွက် . Mirror 1 Mirror2Mirror3ပေးထားတဲ့ Mirror3ခုကနေ အဆင်ပြေတဲ့ Mirror ကနေ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ . အားလုံးအတူတူပါပဲ တစ်ခုကိုသာ Download လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် .Download ပြီးလို့ iso ဖိုင်ရလာပြီဆိုရင် အဲ့ဒါကို bootable disk ဖြစ်အောင် iso burner ဒါမှမဟုတ် Nero တစ်ခုခုနှင့် အခွေ burn လိုက်ပါ . (Nero express ရှိတယ်ဆိုရင် iso ဖိုင်ကို Double click နှိပ်တာနဲ့ Burn ဖို့အတွက် အဆင့်ကို တန်းရောက်သွားမှာပါ)ရတာတဲ့ အခွေကို CD room ထဲထည့်လိုက်ပါ ... မထည့်ချင် BIOS ထဲဝင်ပြီးတော့ 1st boot device ကို CD Room တော့ထားပေးဖို့လိုပါတယ် . ပြီးတာနဲ့ စက်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ . ရွေးခိုင်းတဲ့အဆင့် ရောက်လာပြီ ဆိုရင်အပေါ်ဆုံးက Option ကိုရွေးပေးလိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါ15 မိနစ်လောက်စောင့်လိုက်ပါ . ပြီးတာနဲ့ ဆက်ပေါ်လာတဲ့အဆင့်ကျရင် winpass လို့ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါ .အဲ့ဒါပြီးရင် မိမိရဲ့ HDD ကိုရွေးဖို့အတွက် 1 လို့ ရိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါ . ပြီးရင် admin password ကို ဖျက်ဖို့အတွက် 1 ကို တစ်ခါထပ်ရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်ပါပြီးရင် Y လို့ ရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်ပါ . နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အားလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် reboot လို့ရိုက်ပြီးတော့ . enter ခေါက်လိုက်ပါ . ရိုက်ပြီးတာနဲ့ CD အခွေအပြင်ကို ထွက်လာပါလိမ့်မယ် . ပြီးတာနဲ့ စက်က restart ဖြစ်သွားပြီးတော့ window loading ပေါ်လာပြီးတော့ ယခင်က ပေးထားတဲ့ admin password က ပျက်သွားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Read More
ဒါလေးကတော့ IDM လေးပါ . portable လေးဆိုတော့ အသုံးပြုရတာလဲ လွယ်ကူ သွားတာပေါ့ . ကဲလိုချင်သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ. website ကိုလဲ Connection ဖုတ်လိုက် ဖုတ်လိုက် ဖြစ်နေတဲ့ ကြားထဲကနေ ရေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပို့စ်တွေ အတင်ကျဲနေလို့ နားလည်ပေးကြစေချင်ပါတယ်.Download ifile.it | Download mediafire | Download zshare | Download sendspace | Download ziddu
Compaq presario V3000 Driver for window 7
မေးးသူရအောင်းအကိုရေ . ကျနော်သုံးနေတဲ့စက်က Compaq presario V3000 ပါ . အဲဒီအတွက် Window7 Driver လေးလိုချင်လို့ပါ . အကို အဆင်ပြေရင် ရှာပေးစေချင်ပါတယ်အောက်မှာသာ Download လုပ်လိုက်ပါ . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . CHIPSET:NVIDIA nForce 650i Chipset DriverDownloador use your original chipset drivers: DownloadAUDIOConexant High-Definition SmartAudio 221 DriverDownloadMODEM:HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCPDownloadGRAPHIC:NVIDIA GeForce Go 6150 Graphics DriverNVIDIA GeForce 7150M Graphics DriverDownloadYou can also try your windows Vista drivers: DownloadETHERNET/LANMarvell Yukon 88E8039 PCI-E Fast Ethernet Controller Driver(applicable for win vxp/vista/7 32-bit and 64-bit)DownloadWIRELESS:Broadcom Wireless LAN Driver for Microsoft Windows 7DownloadIntel PRO/Wireless Drivers for Microsoft 7DownloadHP WWAN Broadband Wireless Drivers(originally vista drivers) DownloadSupport Software for HP Integrated Module with Bluetooth Wireless Technology (Microsoft Windows 7)DownloadHP Wireless AssistantDownload Cyberlink YouCam SoftwareDownloadHP hs2300 HSDPA Firmware Update (Vodafone/Cingular)(originally vista drivers) DownloadLightscribe System SoftwareDownload ALPS Touchpad Pointing Device DriverDownloadHP DVB-T TV Tuner External Expresscard Driver(originally vista drivers)DownloadHP Digital/Analog TV Tuner Driver Software(originally vista drivers) DownloadHP Quicklaunch ButtonDownload (direct)Download (HP)CARD READER: Ricoh 5-in-1 Card Reader Host Controller and Driver for Microsoft Windows7(32-bit and 64-bit)Download orDownload
password မေ့တတ်သူများအတွက် window ရဲ့ admin passwo...